छुट्टी को लागि एक सजावट रूपमा आफ्नो हातले नालीदार कागज को लौंग
अब bouquets को धेरै लोकप्रिय विविधता, तर एक छुट्टी लागि फूल को एक साधारण फूलगुच्छा दिन - यो एक सानो पनि corny छ। अर्कोतर्फ, सम्पूर्ण रंग बिना आएको पनि हुन सक्दैन। कारण शिल्प विभिन्न तरिकाहरू तपाईं यस्तो मोती, कपडा, छाला वा तार रूपमा सामाग्री सबै प्रकारका प्रयोग, bouquets बनाउन सक्छ। तर त्यहाँ पनि निर्माण गर्ने विकल्प छ कागजको रंग, यस्तो नालीदार रूपमा। यो विधि सरल र सबैभन्दा सुन्दर मध्ये एक छ।
नालीदार कागज, आफ्नै हातले बनाएको को लौंग, यो दिनुभयो जो बारेमा व्यक्ति सधैं सम्झाउने छ। यो केवल समय समयमा धूलो र सबै हटाउन आवश्यक संग त्यो सुक्यो र झट्टै मरिहाल्यो छैन osypletsya र। एक संवर्धन यस्तो गर्न, तपाईंले निम्न सामाग्री आवश्यक:
नालीदार कागज (रंग, धेरै गुलाबी छ);
तार (बाक्लो र पातलो);
पुष्प टेप (हरियो छाया);
गोंद (प्राथमिकताको PVA)।
एक आकार 45 सेमी लामो र 8 सेमी चौडा को नालीदार कागज को एक पट्टी कटौती गर्न सुरु गर्न।
त्यसपछि तपाईँले 2.5 सेमी -3 को लम्बाइ संग पट्टी मोड गर्न आवश्यक छ।
यो झुकेको छ पछि, यो सम्पूर्ण लम्बाइ संग जोडेको खण्ड सुत्छन् गर्न आवश्यक छ, परिणाम एक आंकडा skater किनारा छ।
थप यो एक फूल गठन भने, उपचार गरे किनारा संग परिणामस्वरूप बाक्लो तार रील पट्टी मा आवश्यक छ।
आधार नजिकै फूल पातलो तार सुरक्षित गर्न परिणामस्वरूप आवश्यकता।
अब तपाईंले कुन आधार मा हो सबै पक्ष, मा अतिरिक्त किनारा ट्रिम गर्न चाहन्छु।
माथिको घुमावदार स्टेम फूल सबै पछि पुष्प टेप तीतो अन्त गर्न तल बाट।
परिणाम वास्तविक कुरा जस्तो देखिन्छ जो नालीदार कागज, आफ्नै हातले बनाएको, एक सुन्दर संवर्धन छ। तपाईंले यी फूल केही बनाएर, सम्पूर्ण संरचना सिर्जना गर्न सक्नुहुन्छ, र एक टोकरी तिनीहरूलाई सुरक्षित वा कागज पैकिंग मा र्याप। तपाईँलाई एउटा अद्भुत उपहार र मिति बनाउन सक्छ सरल तरिका हो। नालीदार कागज को लौंग, को सधैं कोठा मा solemnity एक वातावरण सिर्जना गर्नेछ आफ्नै हातले सिर्जना। फूल को Bouquets विशेष गरी जाडो मा, छुट्टी तालिका सजाउनु गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ। नङ, कागज कोठा (पर्दे, पर्खालहरु, विन्डो खुलने), केही उत्सव लागि आयोजित गरिनेछ जो सजाउनु गर्न सक्नुहुन्छ।
तर हल वा कोठा सजाने लागि मात्र होइन संवर्धन प्रयोग गरिन्छ। आफ्नो हातले नालीदार कागज कुशल कालिगढहरु उत्पादनहरु को एक किसिम सिर्जना गर्नुहोस्। उदाहरणका लागि, यी: विभिन्न बास्केट, रूखहरू, घर बिरुवाहरु, फल र तरकारी। कम सामान्यतः अरूले आफ्नो हातले नालीदार कागज देखि (कुनै फूल) उत्पादन गर्न, तर तिनीहरूले पनि एक निश्चित लोकप्रियता आनन्द। उदाहरणका लागि, लागि क्रिसमस वा क्रिसमस बिदा सजावट।
तर सबै भन्दा लोकप्रिय विकल्प - यो छ बल क्रेप कागज बाहिर। आफ्नो हात तिनीहरूलाई लौंग भन्दा पनि सजिलो बनाउन। अर्डर यस्तो बेलुन उत्पादन गर्न, यो सिर्फ कागज लम्बाइमा 35 सेमी र चौडाई 25 सेमी को पट्टी मापन गर्न पर्याप्त छ। यस्ता स्ट्रिप्स 8 एकाइहरु हुनुपर्छ। त्यसपछि हामी तिनीहरूलाई ढेर राख्नु र किनाराको align गर्न आवश्यक छ। कि पछि, तपाईं यसलाई2भागमा विभाजित थिए तिनीहरूलाई, बाजा गुना र छ कि मध्य, मा तार र्याप आवश्यक छ। त्यसपछि किनारा काट, त्यसैले तिनीहरू skater गरियो। यस पछि, दुवै पक्ष परिणाम पत्रदल अप fluff गर्न आवश्यक छ। परिणाम विभिन्न उत्सव लागि परिसर लागि सिद्ध पृष्ठभूमि हुने एक बल छ।
जहाज - छोराछोरीको लुगा केटाहरू लागि आवेदन। विनिर्माण लागि धेरै विकल्प
तपाईंको आफ्नै हातले कसरी ल्यापटप स्लिभ बनाउन
बच्चाहरु को लागि वैविध्यपूर्ण र रोचक क्रिसमस शिल्प
घाँटी देखि Raglan बुनाई -, सुशील सुन्दर, सुविधाजनक र सजिलो!
मन र विश्राम लागि आफ्नै हातले पहेली
ढाँचा गुडिया tykvogolovki। आफ्नै हातमा गुडिया: मास्टर क्लास
Heather के छ। Ling: उपयोगी गुणहरू, खेती, हेरविचार र समीक्षा
स्कैंडिनेवियाई नेता, वा के क्षेत्र नर्वे
त्यहाँ स्टार्च स्याउ छ? स्याउ को रासायनिक संरचना
Soslan Andiev: क्यारियर र जीवनी
तीव्र हृदयघात: आफ्नो मृत्यु र पहिलो सहायता अघि लक्षण
छैन फर्के गर्न सकिन्छ कि माल को सूची मा के समावेश छ
व्यक्तिगत खाता "Kiwi": सेवा र सम्भावनाहरू
तातो रोलर्स। समीक्षा र सिफारिसहरू
राम्रो सल्लाह: कसरी "आईफोन" मा पैसा बनाउन
संसारमा सबैभन्दा सुन्दर फूल, यो के हो